नुवाकोट १ को सभापतिमा ध्रुव श्रेष्ठ - sailungonline
नुवाकोट १ को सभापतिमा ध्रुव श्रेष्ठ
८ मंसिर २०७८, बुधबार १९:५७ । नुवाकोट
नेपाली काँग्रेस नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ को सभापतिमा धुव्र श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । श्रेष्ठ सभापतिका अर्का उम्मेदवार विषम रिमाललाई पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् । श्रेष्ठले रिमालाई १ सय २४ मतान्तरले पराजित गर्दै सभापतिमा विजयी भएको बताइएको छ । श्रेष्ठले खसेको मतमध्ये ५ सय ११ मत प्राप्त गरे भने विषम रिमालले ३ सय ८७ मत मात्रै प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै सचिवमा शिव गुणी र जगदीश कुइँकेलले विजयी भएका छन् । गुणीले ४ सय ७६ मत प्राप्त गरे भने कुइँकलले ४ सय ४१ मत ल्याएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । सचिवका उम्मेदवार लाल बहादुर तामाङ र विकेश पण्डित पराजित भएका छन् । तामाङले ४ सय २२ मत ल्याए भने पण्डितले ३ सय ४५ मत मात्रै ल्याउन सके ।
त्यस्तै सहसचिवमा ठाकुरप्रसाद लामिछाने र वीरबहादुर तामाङ विजयी भएका छन् । तामाङले ४ सय ९९ र लामिछानेले ४ सय ९१ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने प्रतिद्वन्द्वी अर्जुन गिरीले ३ सय ५९ र पम्बर लामाले ३ सय २२ मत प्राप्त गरेको बताइएको छ ।
त्यस्तै क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूमा ओमजन श्रेष्ठ, मेनुका भट्टराई, इन्दिरा थापा खड्का, इन्द्र प्रसाद लामिछाने, प्रमीला लामा, सुनिता घले निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै धन बहादुर तामाङ, शुकमान तामाङ, कैलाश उप्रेती निर्वाचित भएका छन् । अर्जुन बागदास र सुभद्रा प्याकुरेल यस अघि नै निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै नवराज भण्डारी, हरिराज कार्की, रामेश्वर ढकाल, सुवर्ण श्रेष्ठ पनि कार्यसमितिमा निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै गोकर्ण राज पण्डित, दिनेश तामाङ र वरदान थपलिया सहित ४५ जनाको क्षेत्रीय कार्यसमिति चयन भएको छ ।
यसैबिच, नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू समेत निर्वाचित भएका छन् । जसमा अच्युत प्रसाद गुरागाईँ, अर्जुन प्रसाद न्यौपाने, कृष्ण कुइँकेल, कृष्ण बहादुर लामा र डा. केदारनरसिंह के.सी रहेका छन् ।
त्यस्तै रमेशकुमार महत, बिजय के.सी, निरञ्जन थापा, महेन्द्र थिङ, शिव प्रसाद अधिकारी, सूर्यबहादुर तमाङ, टीका बहादुर पुलामी र कुमार गुरुङ पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै रोसना थापा महत, बिना बुढाथोकी महत, सीता मिजार, सरिता आचार्य, भवानी देवकोटा, रामेश्वर प्रसाद भण्डारी, वैकुण्ठ खनाल, सरस्वती मल्ल श्रेष्ठ, माया शेर्पिनी, कल्पना नेपाली, उपेन्द्र मिश्र र अमृता नेपाल (डङ्गोल) पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएको बताइएको छ ।
केसी पक्षले सदाबार आङ्खनो पकड क्षेत्र मानेको नुवाकोट अबदेखि महत पक्षको पोल्टामा परेको छ । भर्खरै सम्पन्न नुवाकोट दुवै क्षेत्रका प्रदेशहरुमा डा.रामशरण महत र डा. प्रकाशशरण महत समूहका उम्मेदवारहरुले अर्जुन नरसिंह केसी पक्षका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै विजयी भएका छन् । यो सँगै नुवाकोटका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा महत समूहका उम्मेदवार सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।
कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो भने झैँ महत समूहमा केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह तामाङ र पूर्वसभापति ध्रुव अधिकारीको समेत साथ रहेकोले महत पक्षले सहजै जित हासिल गरेको बताइएको छ ।8